Otu esi ewere uru nke HBO Max na-enye dị ka onye ahịa mbụ | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi enweta uru nke onyinye HBO Max dị ka onye ahịa mbụ
Edere Ferreno | 02/11/2021 11:30 | Internet
HBO Max bụ ọrụ nkwanye ọhụrụ na-abịa Spain, dị maka ụbọchị ole na ole. N'oge mmalite ya na mba anyị, ndị ọrụ nwere ike irite uru site na nnukwu onyinye, nke na-enye ohere ịnweta ikpo okwu nkwanye ugwu a na ọnụahịa kacha mma, yana 50% mbelata. Onyinye a na HBO Max bụ ihe ndị ahịa HBO Spain mbụ mere.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ohere a na-enye HBO Max mana ị bụ otu n'ime ndị ahịa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ gara aga, anyị ga-agwa gị otu ị ga-esi nweta ya. Ekele maka nke a ị nwere ike nweta mbelata 50%. na ọnụahịa ndenye aha. Ọzọkwa, mbelata a bụ ruo mgbe ebighị ebi, ọ bụghị onyinye nke ga-agwụ n'ime ọnwa ole na ole, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karịa onye ọ bụla.
Ọnụahịa nke ọrụ nkwanye ọhụrụ a na Spain bụ euro 8,99 kwa ọnwa, yabụ ndị na-eji nkwalite a ga-eme ya. na-akwụ naanị 4,49 euro kwa ọnwa maka ndenye aha gị. Ọ bụ ọnụ ala dị ala, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karịsịa ịbụ onye ahịa n'elu ikpo okwu a. Olee otú anyị ga-esi jiri nkwalite a mee ihe? Anyị na-agwa gị otú ọ ga-esi kwe omume, nakwa maka ndị ahịa ochie nke HBO Spain ọ ga-ekwe omume iji ohere a na-adọrọ mmasị.
1 HBO Max na ọkara ọnụahịa
2 HBO Max na-enye maka ndị ahịa ochie
3 Ọdịnaya na HBO Max
4 Ọ bara uru?
HBO Max na ọkara ọnụahịa
Ihe mmeghe a bụ ihe ga-adị maka obere oge. Ị nwere ike irite uru na ya ruo na Nọvemba 30 2021, yabụ ị ka nwere izu anọ ịdebanye aha na ikpo okwu iyi wee si otú a nweta mbelata 50% ahụ ruo mgbe ebighị ebi na ọnụahịa ndenye aha kwa ọnwa. Mana ọ dị mkpa iburu ụbọchị a n'uche, ka ị ghara ịgbaghara ya.
Na mgbakwunye, ihe ọtụtụ n'ime unu nwere ike maralarị nke a na-enye nkwalite ma ọ bụ mmalite ọ bụ ihe dị naanị maka ndị ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ ndị ahịa ọhụrụ. Nke a bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na-eweta nsogbu maka ndị ọrụ ahụ debanyere aha na HBO Spain, ikpo okwu dị na obodo anyị ruo mgbe mmalite nke ọrụ ọhụrụ a. Agbanyeghị, ndị ahịa mbụ ga-enwekwa ike irite uru na nkwalite a, ebe enwere ụzọ isi mee ya.
N'ịbụ onye na-enye naanị maka ndị ahịa ọhụrụ, ndị chọrọ ịdenye aha na HBO Max ha agaghị enwe ike iji akaụntụ email nke edebanyelarị na HBO Spain. Nke a bụ otu n'ime igodo ndị anyị ga-eburu n'uche, n'ihe banyere ịbụ onye ahịa ochie nke ọrụ a, iji nwee ike ịnweta akaụntụ n'elu ikpo okwu ọhụrụ ma kwụọ ọkara ọnụahịa kwa ọnwa n'ime ya.
HBO Max na-enye maka ndị ahịa ochie
Kedu ka anyị ga-esi nweta uru nke a HBO Max ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ahịa ochie? Ihe anyị nwere ike ime na nke a bụ ihe dị nnọọ mfe. Mbụ anyị ga-akagbu akaụntụ anyị nwere ugbu a na ụlọ ọrụ, nke mere na anyị abụghịzi ndị ahịa. Ọzọ, anyị ga-emepụta akaụntụ ọhụrụ n'elu ikpo okwu, ka anyị wee nweta ego 50% na ndenye aha.
Mgbe anyị gara imepụta akaụntụ ọhụrụ na HBO Max, anyị ga-eji adreesị ozi-e dị iche. Ọ bụrụ na ị na-eji otu nke ị nwere ugbu a na HBO Spain, ikpo okwu agaghị ama gị dị ka onye ahịa ọhụrụ, kama a ga-ahụ gị dị ka onye ahịa ochie na ị gaghị enwe ike irite uru na mbelata ahụ. Ya mere ọ dị ezigbo mkpa na anyị na-eji adreesị ozi-e ọhụrụ na nke a iji kwụọ naanị euro 4,49 kwa ọnwa n'elu ikpo okwu, kama 8,99 euro.
Site na iji adreesị ozi-e ọhụrụ ahụ eletrọnịkị anyị nwere ike irite uru na onyinye a na HBO Max, ọbụlagodi ndị ahịa ochie. Dịka anyị kwurula, mbelata a bụ ihe na-adịgide adịgide, ya bụ, ị ga-akwụ ụgwọ oge fọdụrụnụ ị nwere ndenye aha na ọrụ a maka euro 4,49 kwa ọnwa, nke bụ nnukwu ọnụ ahịa na mpaghara ahịa a. Ọ bụrụ na n'ọdịnihu ị na-eme mkpebi ịkagbu ndenye aha ahụ, ma mgbe e mesịrị (ọnwa ole na ole ka e mesịrị) ị na-eji ọrụ a ọzọ, ọnụahịa ị ga-akwụ bụ ọnụahịa nkịtị, ọ bụghị ọnụ ahịa mbelata. Ozugbo kagburu ndenye aha, onyinye a efunahụla.
Na mgbakwunye, akụkụ ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na ọ bụrụ na ị denye aha na ọnụego a ma ọ bụ nkwalite na HBO Max, ị gaghị enwe ike ịgbanwe na ọnụego ọrụ ndị ọzọ. Ị gaghị enwe ike ịgbanwe ọbụna na nke afọ, n'ihi ya, ị ga-abụ "kechie" na ọnụego a, nke na-ekwesịghị ịbụ nsogbu, ma ọ dị mkpa ka e buru ya n'uche, ma ọ bụrụ na e nwere ndị ọzọ ị na-atụle. nwere ike ịmasị.
Ọdịnaya na HBO Max
Mwepụta nke HBO Max na Spain na-echere ọtụtụ maka ụfọdụ ndị ọrụ, mana emechara wepụta ya tupu njedebe nke 2021, dịka ụlọ ọrụ ahụ zubere na mbụ. Ọ na-aghọ ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ị ga-eburu n'uche n'ime akụkụ nke nyiwe mgbasa ozi na mba anyị. Nyere mmalite a, otu n'ime obi abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ bụ ma ọ bara uru ịnweta akaụntụ. Ebe ọ bụ na anyị anaghị ama mgbe niile ma ọdịnaya a na-enye bụ ihe na-amasị anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na ha nwere ọdịnaya n'ime ọdịmma anyị.
Katalọgụ ọdịnaya dị ukwuu yana ọnụnọ nke ọdịnaya Warner Media pụtara ìhè karịa ihe niile. Ụlọ ihe mmepụta ihe a bụ na-ahụ maka ihe nkiri n'ime DC Universe (Wonder Woman, Justice League ...), yabụ ndị a bụ ọdịnaya anyị ga-enwe ike ịhụ n'ime ikpo okwu a. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ewepụta ọdịnaya ndị a n'otu oge na sinima na n'elu ikpo okwu, si otú a na-enwe ike ịhụ ha ozugbo n'ụlọ.
Tinyere ọdịnaya Warner Media, anyị nwere ike ịnweta ọwa ma ọ bụ ụlọ ihe nkiri ndị ọzọ dịka Netwọk eserese eserese, TBS, TNT, igwu mmiri okenye, CW, DC Universe na HBO Max, na ọdịnaya sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nkiri dịka New Line Cinema. Ya mere, anyị nwere ọtụtụ ọdịnaya, nke a na-emekarị maka ndị na-ege ntị ndị okenye karị, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ọwa dị ka Cartoon Network nke dị mma maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Tụkwasị na nke a, na ọwa a, anyị ga-enwekwa ọtụtụ mmepụta HBO, nakwa ihe mmepụta Spanish, iji nwee ụdị dị iche iche dị n'ime ya.
A na-atụ anya mwepụta ọhụrụ n'ime ọnwa ndị na-abịa, nke ga-enyere katalọgụ ọdịnaya a aka itolite n'ụzọ dị mma. Usoro, akwụkwọ akụkọ na ọtụtụ ihe nkiri ga-abịa na HBO Max. Na mgbakwunye na ọdịnaya ama ama dị ka The Maid's Tale or Friends, nke bụ otu n'ime nnukwu akụ nke ikpo okwu n'ọtụtụ mba.
Otu n'ime obi abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ bụ ma ọ bara uru ịdenye aha na ikpo okwu a. Ihe mmalite HBO Max na Spain, nke nwekwara ndị ahịa ochie nwere ike irite uru, ọ bụ ihe doro anya na-eme ka ọ bụrụ ihe na-akpali mmasị ịnwale ya. Ị nwere ike ịnwale ya ruo ọnwa ole na ole iji hụ ma ọdịnaya dị na ikpo okwu a masịrị gị, tupu ịme mkpebi ikpeazụ, na-akwụ naanị 50% nke ọnụahịa ndenye aha kwuru,
Tụkwasị na nke a, ikpo okwu a na-enye anyị a usoro ọrụ ndị ọzọ nke ahụ nwere ike ịmasị ndị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe ruru profaịlụ ise n'otu akaụntụ ahụ, ha niile nwere ike ịhazi ya, nke mere na onye ọ bụla ga-enwe ọdịnaya kachasị amasị ya mgbe niile na profaịlụ nke ya. Enwekwara ndụmọdụ ahaziri ahazi dabere na mmasị gị, ka ị nwee ike ịchọpụta ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile n'elu ikpo okwu dabara ihe ị na-ahụ ma ọ bụ ihe masịrị gị n'ozuzu ya.
Enwekwara njikwa nne na nna dị iche iche n'elu ikpo okwu, ka ndị nne na nna nwee ike ịhazigharị ihe ụmụ ha ga-enwe ike ịhụ na akaụntụ ha na HBO Max. Tụkwasị na nke ahụ, ikpo okwu nwere ọdịnaya dị mma nke kwesịrị ekwesị maka ụmụaka, ya mere ọ ga-akwado ihe ọdịnaya ị nwere ike igosi na nke kacha nta nke ụlọ n'oge niile. A ga-akọwapụta ebe ụmụaka nọ nke ọma, ka ha wee ghara ịhụ ihe na-ekwesịghị ekwesị maka afọ ndụ ha. A na-ahapụkwa ya ka ọ kpọọ ọdịnaya n'otu oge na ngwaọrụ dị iche iche ma ọ bụ ihuenyo.
Na nkenke, HBO Max na-abịa na Spain iji nye ọtụtụ agha ma gosipụta ya dị ka ihe ọzọ iji tinye n'uche na nyiwe dị ka Netflix, Amazon Prime Video ma ọ bụ Disney +, nke enweelarị ezigbo ọnụnọ na ahịa mba. Kaadị opi nke Warner na eziokwu ahụ bụ na enwere ọdịnaya nke ewepụtara ozugbo n'elu ikpo okwu bụ ihe nwere ike inye aka, yana onyinye mbido a. Ihe kacha mma ị nwere ike ime bụ ịnwale ya ugbu a na ị nwere ike nweta mbelata ego a ka ị nwee ike ikpebi ma ọ bara uru ịnweta ndenye aha na ọrụ nkwanye a. Onyinye a dị ruo Nọvemba 30, yabụ kaa akara ụbọchị a na kalenda gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Otu esi enweta uru nke onyinye HBO Max dị ka onye ahịa mbụ
Otu esi atụgharị ihuenyo kọmputa gị ngwa ngwa
Otu esi ehichapụ akaụntụ Telegram m kpamkpam